Dukaammada Apple qaarkood mar hore ayey kuu oggolaanayaan inaad tijaabiso AirPods ka hor intaadan iibsan | Waxaan ka socdaa mac
Dukaammada Apple qaarkood waxay horeba kuu oggolaadeen inaad ku laabatid isku day AirPods ka hor intaadan iibsan. Warkani muhiimad kale kuma lahaan doono macno kale, laakiin hadaan tixgalino sababta wax u fudud sida tan loo mamnuucay, farxada COVID-19 ee faafa, runtu waxay tahay inay farxad tahay akhrinta cinwaanka.
Sannad ayaa laga joogaa markii ay bilaabeen inay si nidaamsan u xiraan dhammaan Apple Store adduunka oo dhan cudurkan faafa awgeed. Markay in muddo ah xidhnaayeen, ayay ku xidhan tahay aagga, waxay bilaabeen inay dib u furaan tallaabooyin nabadgelyo oo ka hortagga cudurka faafa oo aan hore loo arag. Marka tilmaantan fudud ee ah inaan awoodno inaad ku tijaabiso AirPods dukaanka ayaa calaamad u ah inaan horeyba uga guuleysaneyno fayraska.
Qaar ka mid ah Dukaammada Apple ayaa durba ku soo noqonaya xaalad caadi ah, waxayna bilaabeen inay dabciyaan tallaabooyinka adag ee ka soo horjeedka wada-noolaanshaha ah ee ku dhibaateeyey tan iyo markii ay dib u furmeen muddada xabsiyadda ka dib. Muunad ka mid ah tan ayaa ah in dukaamada Apple qaarkood aad xitaa isku dayi karto qaar AirPods si aad u maqashid tayada codkooda ama ay ugu habboon yihiin dhegta intaadan wax iibsan.
Apple ayaa joojisay inay macaamiisha u tijaabiso samaacadaha dhagaha ee Apple Stores markii Fayruuska corona wuxuu bilaabay inuu fido sanadkii hore. Shirkadda ayaa hadda u oggolaaneysa xoogaa tijaabo ah gudaha Mareykanka iyo dalal kale oo ka mid ah dukaamada u furan booqashooyinka ballan ama socod. Awood u lahaanshaha tijaabinta AirPods horay ayaa looga heli jiray meelo cayiman Aasiya muddo bilo ah.
Dukaammada Shiinaha ayaa ugu horreeyay
Kuwa ugu horreeya ee sidaas sameeyay waxay ahaayeen kuwa Shiinaha, oo ay ku xigto waddan kale, halkaas oo masiibada si adag loo xakameeyey in muddo ah. Thanks to ololaha talaalka adag ee ka dhanka ah COVID-19 ee laga fulinayo Mareykanka, waxay u ogolaaneysaa tanaasul dhanka amaanka ah oo ka dhan ah viruska. Waa in la xusuusnaado in ku dhowaad 50% dadka Mareykanka ay horey uga tallaaleen COVID-19.
Waxaan rajeyneynaa in cinwaanka wararka sida ugu dhaqsiyaha badan sidoo kale lagu dabaqi doono dalkeena. Mana ahan sababta oo ah waxay quseysaa inaad awoodid inaad ku tijaabiso samaacadaha dhagaha kahor intaadan iibsan, maxaa yeelay waxaad ka iibsan kartaa khadka tooska ah, haddii aysan ku qancin, dib u celi, laakiin macnaha aad u muhiim ah ee faahfaahinta, mid kale oo tilmaamaya soo noqoshada si caadi loo wada sugaayay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dukaammada Apple qaarkood waxay horeyba kuu oggolaadeen inaad tijaabiso AirPods kahor intaadan iibsan